भर्खरै विबाहित दुलहीले जे हर्कत गरे थाहा पाउँने संसारका सबै चकित ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/भर्खरै विबाहित दुलहीले जे हर्कत गरे थाहा पाउँने संसारका सबै चकित !
काठमाडौं । भारत राजस्थानको भरतपुरमा शहरदेखि करीव १० किलोमिटर टाढा हत्नी गाउँमा बुधवार राती एक अनौटठो घटना घटेको छ । यहाँ दुई जना दुलहीले आफ्ना घरका सबैलाई बेहोर गरेपछि २ लाखको नगद र ५ लाखको गहना लुटेर भागेका छन् । बिहान उक्त घटनाको जानकारी पाएपछि दुलहा ३२ वर्षीय रमेश उर्फ ​​भूरा, २७ वर्षीय नाहर सिंह, ७५ वर्षीय रामकिशन (ससुरा), र उनीहरुकी भाउजु २६ वर्षीया पूनमलाई अर्धचेत अवस्थामा जिल्ला आरबीएम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
डाक्टरहरू विश्वास गर्छन् कि यी ४ व्यक्तिलाई केहि मिसाइएको निद्रा लाग्ने गोली खुवाइएको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ पीडितका परिवारका सदस्यहरूले यो पनि बताएका छन कि नयाँ दुलही सीमा र शिवानीको चूलो बुधवार प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले चामल आफैंलाई अनुष्ठानको रूपमा बनाए, जबकि काढी र अण्डा करी परिवारका अन्य सदस्यहरूका लागि बनाए ।
उनीहरूले रातमा चिया बनाएर परिवारलाई पिलाए । जानकारी अनुसार उनीहरुले चियामा केही मिसाएको हुनुपर्छ । यसले दुलहा, ससुरा र जेठानी बेहोस भए । दाजुभाइ मुकेशले थोरै खाना खाए, त्यसैले उनीमा बेहोसपनको केही प्रभाव भएन । अर्को परिवार बिहान उठे, तिनीहरूले दुलही घरबाट सुन चाँदीको गहना, बहुमूल्य कपडा, सामान र नगद लिएर घरबाट भागेको थाहा पाए ।
दुबैलाई खोजी गर्न कोशिस गरियो, तर तिनीहरू कहिँ भेटिएनन् । पीडित पक्षको तर्फबाट दुलहाका जेठा भाई अमर सिंहको तर्फबाट चिकासना प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । यो डर छ कि गिरोह जो विवाह गर्न प्रयोग गर्थे र फेरि सक्रिय भयो । यस सन्दर्भमा जब बिचौलियाले सन्तोषसँग फोनमा कुरा गरे, उसले पहिला दुबै दुलहीलाई समात्न भने । यद्यपि उनले पछि फोन स्विच अफ गरे । दुलहीको घर ताला लगाएको थियो ।
हठनीका रामकिशनको परिवारमा ६ छोरा र १ छोरी छन् । यी मध्ये दुई छोरा रमेश उर्फ ​​भूरा र नाहर सिंहको नोभेम्बरमा बरेली (यूपी) निवासी सीमा र शिवानीसँग एसटीसी आवास बोर्ड भरतपुरमा विवाह भएको थियो । बरेलीका निवासी सन्तोष उर्फ ​​पप्पू बिचौलियाका रुपमा परिचित थिए । सम्पूर्ण परिवारले विवाहको लागि २ लाख रूपैयाँ खर्च गरे । उनका परिवारले कथित दुल्हन र उनका परिवारलाई ट्याक्सीबाट भरतपुर आउँन जानको लागि भनेर १० हजार पनि खर्च गरेका थिए । दुबै दुलहा दिल्लीको एक कारखानामा काम गर्छन् ।